Haweenay 78 jir ah oo haysata horyaalka toogashada (sharpshooter) dunida+SAWIRO – SBC
Haweenay 78 jir ah oo haysata horyaalka toogashada (sharpshooter) dunida+SAWIRO
Posted by editor on April 23, 2012 Comments
Da’ada 78 jir dadka gabowga ah waxay miciin bidaan ulo ku tukibid, darbi cuskasho, xirasho indho gashi (Ookayaale), ama inay gacan ka qabasho ka helaan awlaad wixii ay dhaleen ama in kale oo aadane ah oo ALLE u soo diro, laakiin sidaasi ma ahan Chandro Tomar oo u dhalatey dalka Hindiya waxayna da’daasi ku tahay qof ku xeeldheer toogashada (sharpshooter) iyadoo dhawr mar ku guuleystey abaalmarino caalami ah oo la xiriira toogashada.
Chandro Tomar waxay noqotey qofka dumar ah ee dunida ugu da’ada weyn ee ku tartama toogashada iyadoo ku guuleystey 25 tartamo toogashada la xiriira oo lagu qabtey dalkeeda Hindiya, iyadoo xirfadaasi ku xoogsigeeda ku soo korsiay lix caruur ah oo ay dhashey iyo 15 kale oo ay sii dhaleen ama Ayeeyo ay u tahay.
Chandro tartamada toogashada ee ay ka qayb gashey midkii ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa mid ay la gashay ku xigeenka taliyaha dambi baarista ciidamada Booliiska ee magaalada Delhi ee caasimada Hindiya, ninkaasi oo ahaa nin looga dambeeyey toogashada iyadoo ninkaasi meel cidlo ah ku dirtey.
Farooq Pathan oo isaga iyo laba qof oo ay saaxiibo ahaayeen aasaaseen naadiga toogashada ee Delhi ayaa isagoo ka sheekaynaya markii ay naadiga timid Chandro oo aheyd qof da’a ayna tiri waxaan doonaan inaan tartanka ka qayb galo, wuxuu sheegay in ay la soo baxdey la yaab oo ay toogashada ku noqotey qof mucjiso ah.
“Qof aad ugu xeeldheer toogashada ayay aheyd marka loo eego tartamada, xitaa rag ka mid ah ragii xarfaanta ku ahaa toogashada ayaa joojiyey ka qayb qaadashada tartamada ay ku lugta laheyd duqdan iyagoo ka fogaanayey in la bahdilo oo ay ka guuleysto Islaantan waayeelka ah, waxay leedahay xirfad la yaab leh, waxaana aad ii soo jiitey toogashadeeda marka ay isha isku qabanayso” ayuu yiri Farooq Pathan.
Xirfada toogashada duq Chandro iskuma koobin oo waxay doonaysaa in xirfadaasi ay ka dhaxasho gabadheeda Seema oo goor horeba la soo baxdey la yaabkii hooyadeed ee la xiriiray toogashada waxaana ay dhawaan ay noqotey haweenaydii ugu horeysay ee u dhalatey Hindiya oo ku guuleysata bilada toogashada ee Baastoolada & Buntuqa tartankii lagu qbatey magaalada Chennai ee caasimada gobolka Tamil Nadu ee dalka Hindiya.
78 jir Chandro inkastoo da’adaasi ay jirto oo ay meel sare ka gaartey toogashada hadana adeega iyo quudinta qoyska ma ahan mid ay meel iska dhigtey waxay ilaa iyo hada u karisaa cuntada iyo waliba nadaafada guriga kaalin weyn ka qaata, waxaana ugu muhiimsan ee ay qabaa waa inay hubiso in qoysku ay wada casheeyaan.
waa naag fiican somaliya in aay joogtaa ku fiicnedd hana barto waa qof muhiim ah
XAAJI MAXAAD UCIIL QABTAA 21 SANO KADIB IN LAGU BARO QAABKA WAX LOOTOOGTO? YAAB WAAYE
qofka wixii uu ku dhiirado waa uu gaaraa rajada lagama quusto
rajada lagama quusto guushana waa meesheeda